Nyocha Mibro Lite: ihuenyo AMOLED na ọnụ ahịa dị ala | Androidsis
Nyocha Mibro Lite: ihuenyo AMOLED na ọnụ ahịa dị ala
Ahịa smartwatch juputara na ngwaahịa na ọnụahịa dị iche iche, mana ịchọta smartwatch nke na -abịa ihuenyo AMOLED dị ka Mibro Lite na ọnụ ahịa o nwere, ọ siri ike. Ọ nọ ebe ahụ, n'etiti ihe ndị ọzọ, ebe anyị na -ahụ ihe dị iche na smartwatch a ebe ọ bụghị naanị na -enweta mmeri na ihuenyo, kamakwa na batrị.
Ná ngwụsị nke isiokwu a, ị ga -ahụ ya onyinye ị nwere ike zụta elekere na -erughị € 50 na -eche na ọ nwere 99 ọnụ ahịa mkpọsa. Ọ bụghị ihe ọjọọ ịtọ ihuenyo ahụ wee nwee ọ enjoyụ n'ihe niile anyị ga -agwa gị ọzọ.
Ọ bụrụ na mbelata 50% nke ọnụ ahịa ya adịchaghị gị ka, anyị nwere onyinye ọzọ ịkpọsa: ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime 50 mbụ zụrụ Mibro Lite smartwatch na Aliexpress ị ga -ewere ụfọdụ Igwe isi ekwe ntị Lenovo dị ka onyinye.
Jiri ohere mmeghe a mee ihe haciendo pịa ebe a.
1 Nyocha Mibro Lite smartwatch: elekere nwere enyo kachasị mma na ọnụ ala
1.1 Ọrụ Mibro Lite dị omimi
2 Mmechi ikpeazụ: Mibro Lite ọ bara uru?
Nyocha Mibro Lite smartwatch: elekere nwere enyo kachasị mma na ọnụ ala
Dịka anyị na -atụ anya, nke a bụ elekere mara mma nke bara ezigbo uru. Nhazi ya bụ kpochapụwo, ya bụ, elekere okirikiri mana nke ahụ anaghị efunahụ ya mmetụ ọgbara ọhụrụ na egwuregwu onye na -enye ya eriri ya. Ọ bụ smartwatch ị nwere ike iji n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ na uwe ọ bụla. E mesịa, anyị ga -ekwu n'ụzọ zuru ezu banyere njirimara ya, dị ka ịdị arọ ya na akụkụ ya, mana anyị na -atụ anya nke ahụ ọ bụ ezigbo ìhè. Anyị na -emesi gị obi ike na eriri ya enweghị ahụ iru ala n'oge ọ bụla.
Ka anyị gabiga atụmatụ ya niile usoro ka ị mara ya n'uju:
Njikọ: Bluetooth 5.0
Batrị na obodo kwụụrụ: Ndị mmadụ Xiaomi 230 mAh na -agbakọ nnwere onwe nke ụbọchị 8 site na iji smartwatch na ụbọchị iri n'ụdị ya. A na -akwụ ụgwọ elekere anya ndọta
Mmekọrịta: Android 5.0 ma ọ bụ karịa / iOS 10.0 ma ọ bụ karịa
Mmiri mmiri: nwere nguzogide IP68
Ụdị egwuregwu dị iche iche: Ụdị egwuregwu 15: badminton, bọọlụ, elliptical, ọzụzụ ike, nnwere onwe, ịga ije, ịgba ịnyịnya n'èzí, ịgba ịnyịnya ime ụlọ, ịga ije, ịgagharị, yoga, basketball, tennis, ịgba ọsọ, ịgba ọsọ ...
Sensọ: ihe mmetụta iji nyochaa oke obi gị, SpO2 nke ga -atụkwa ọkwa oxygen ọbara gị na ihe accelerometer.
Ọrụ: Nyocha ụra na nleba anya abalị, nsuso nchekasị, iku ume, ịmụrụ anya ọgwụ, onye na -ahụ maka ndụ anaghị anọkarị, ihe mgbako, igwefoto dịpụrụ adịpụ, mkpu, ihu igwe, elekere nkwụsị, ọkwa sitere na ngwa ekwentị mkpanaaka.
Ihuenyo: 1,3 ”ihuenyo AMOLED. Okirikiri na agba nwere ogwe mmetụ 360 x 360 pikselụ nwere iko gbara agba. Smartwatch nwere ihu elekere dị iche iche ka ị nwee ike họrọ
Ogo na ibu: Elekere ahụ bụ milimita 43 n'obosara na milimita 9,8. Eriri dị 20 milimita n’obosara na milimita 245 n’ogologo. Ọnụ ọgụgụ niile nke smartwatch bụ gram 48.
Ngwa ngwa: Mibro dabara.
dakọtara: Smartwatch dakọtara na gam akporo 5.0 ma ọ bụ sistemụ dị elu yana yana iOS 10.0 ma ọ bụ sistemụ dị elu.
Ọrụ Mibro Lite dị omimi
Dịka anyị tụrụ anya na mbụ na njiri mara, elekere a nwere ụdị egwuregwu iri na ise na ekelekwa ndị na -ahụ maka mmetụta ya, ọ ga -enwe ike inyocha ihe niile ị chere, dịka obi ma ọ bụ ụra. Anyị ga -akọwa ọrụ ndị a na omimi:
Ihe mgbako arụnyere n'ime elekere: Elekere ahụ nwere ihe mgbako wuru n'ime ya ka ị nwee ike mee mgbako ọnụọgụ ọ bụla site na nkwojiaka gị. Ọ gaghị adị gị mkpa iji ekwentị mkpanaka gị ma ọ bụ ihe mgbako ọ bụla mara mma.
Oti mkpu: Ị nwere ike ịtọ ngụkọta nke mkpu 8 na -abịa na ịma jijiji. Ị gaghị ehi ụra.
Ịma ọkwa ngwa: Mibro Lite ga -eji ihuenyo AMOLED okirikiri ya mara ọkwa ọkwa ọ bụla sitere na ngwa ndị ama ama: Instagram, WhatsApp, SMS, oku, Facebook, Twitter ...
Sochie mgbatị ahụ ruru egwuregwu iri na ise: Ọ bụrụ n ’ileba anya na atụmatụ ndị anyị tụlere na mbụ, ị ga -ahụ na ọ nwere ike nyochaa ihe ruru egwuregwu iri na ise. Ị ga -enwe ike tụọ mgbatị ndị a niile.
Trackingchọta ụra: Ọ ga -agwa gị gbasara ihi ụra nke ọma ma nye gị ndụmọdụ maka ya ka ọ ka mma.
Obi obi: Mibro Lite nwere ike tụọ ụda obi gị ụbọchị niile.
Ngwa ihu igwe: Ọ nwere ngwa iji kọọrọ gị gbasara ihu igwe na mpaghara gị oge ọ bụla ịchọrọ n'ejeghị ndị mpụga.
Ihe ncheta: Ịnọ ọdụ, ị drinkingụ mmanya, ịmụ akwụkwọ, ọgwụ na ọtụtụ ndị ọzọ ị na -eme mmemme ma ọ bụ nke elekere na -achọpụta.
Mmechi ikpeazụ: Mibro Lite ọ bara uru?
Ihuenyo AMOLED Ọ bụ ihe pụtara na ọnụahịa ya. Mibro Lite Ọ nwere atụmatụ niile nke smartwatches ọ na -asọmpi na kwa, i merie na oji. N'ezie, ọ bụrụ na ị bụ onye na -eme egwuregwu, ị gaghị agbaghara egwuregwu kachasị amasị gị, ma ọ bụrụ na ị na -enwe nchegbu maka ịnwe elekere iji tụọ ụbọchị gị kwa ụbọchị bụkwa ezigbo nhọrọ.
Banyere batrị ya, nke na -abụkarị akụkụ dị mkpa nke ngwa ndị a, ekwesịrị ịsị na ọ dị ezigbo mma na nke kachasị na ọ bụ ndọta, ya bụ, ị gaghị akwụnye ya ebe ọ bụla iji kwụọ ya ụgwọ. Ịkwụ ụgwọ ya na -ewe ihe dị ka awa abụọ na ọkara iji nweta 100% batrị. Site na nke ahụ 100% ọ na -anọ ụbọchị 8 site n'iji ya eme ihe. Ihe niile bụ n'ihi na ihuenyo ya na -eri ihe na -erughị LCD.
Na njedebe nkwubi okwu anyị bụ na ee, n'ezie ọ bara uru. Na ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na iji onyinye mmalite nke anyị ga -akọwa n'okpuru, na -ahapụrụ gị njikọ ahụ kemgbe elekere ọ na -agbada ọbụna ruo 50% nke ọnụ ahịa ya. N'ụzọ dị otu a, ị ga-azụta ezigbo smartwatch na ọnụ ahịa dị ala. Ọ bụ oge dị mma ijide ya.
Anyị na -echetara gị na onyinye a dabere na ịzụrụ ya n'etiti Septemba 27 na 30 n'ihi na n'ụbọchị ndị ahụ a ga -enwe onyinye mmeghe. Mmadụ 500 mbụ zụrụ ya na ịpị ebe a ga -akwụ ụgwọ belatara nke $ 43,99. Ma ọ bụrụ na ị sokwa na 50 kachasị elu ị ga -ewere ekweisi ikuku na Lenovo. Nkwalite ahụ anaghị akwụsị ebe ahụ ebe ọ bụrụ na ịzụrụ ya n'ụbọchị ndị ahụ Ị ga -enweta koodu ego maka ụlọ ahịa $ 5.
Ma gị, ị nwalela elekere smart a? Kedu ihe ị chere? Hapụ anyị okwu gị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Nyocha Mibro Lite: ihuenyo AMOLED na ọnụ ahịa dị ala
Android 12: ụbọchị mwepụta na ekwentị mkpanaka ga -enwe ya
Ọ bụrịrị eziokwu: Xiaomi Mi 11 Lite NE abịarute n'ụlọ anyị